Vokatry ny famerenana amin'ny ROMs CyanogenMod | Androidsis
el_iulius | | hevitra, Rom, Tutorials
Fantatry ny rehetra ny isan'ny tombony azo avy amin'ny fametrahana a Rom masaka ao amin'ny terminal Android anay. Anisan'izany ny fiainana bateria, fanadiovana programa ary hafainganana. Na dia tsy soso-kevitra ho an'ny mpijery rehetra aza izany satria misy ny loza ateraky ny biriky amin'ny terminal rehetra.
Androany dia te hiresaka momba ny toetra mampiditra ny Rom miankina amin'ny Cyanogen Mod y somary miafina izany. ny Cyanogen Mod 6 dia efa mampiditra an'io endri-javatra io, ny vokany azo. Azavaiko izay misy azy.
Ity endri-javatra ity mamela ny mpampiasa hametraka fandikana amin'ny interface feno an'ny terminal mba hanome azy loko miloko izay tadiavintsika. Ny CM7 amin'izao fotoana izao dia:
Tsy misy vokany (hampiatoana ny zava-drehetra).
Mode amin'ny alina (mena).
Calibrated (N1) Mena
Calibrated (N1) Mangatsiaka
Hatreto, kely sisa ny hanampy. Betsaka aminareo no mety mieritreritra, adala inona izany. Azo antoka fa mandany bateria betsaka kokoa ary zavatra tsy misy ilana azy. Eny, amiko manokana dia mety amiko io. Mampiasa ny maody alina aho mba hananako ny birao araka ny hita eo amin'ny pikantsarin'ny fanombohana. Mora azo ny mamaky eo am-pandriana amin'ny fotoam-pandriana fa tsy boky fotsiny, raha tsy izany ny interface rehetra. Ity misy fiantraikany amin'ny loko, fa ny tselatra ny efijeryo Android mihena be, noho izany tsy hamela antsika jamba antsasaky ny famakiana ny RSS, mandritra ny firesahana Gtalk na mandefa sasany izahay Twit.
Mahaliana ny safidy widget, manampy ny fandikana amin'ny birao izay ampiasainay indrindra. Ny fananana ny safidy eo amin'ny birao mba hampavitrika na hanafoanana ny sitrapony dia tsy mila mankany amin'ny menio, fanovana, toe-javatra Cuanogenmod, interface, effaging rendering (ao amin'ny CM7) isika. Mba hanampiana ny Widget, tena tsotra, navelanay nandritra ny fotoana fohy ny rantsan-tananay teo amin'ny birao, nisafidy ny safidy izahay hanampiana widget, ary avy eo Render FX Widget. Farany dia mifidy izay loko tadiavintsika isika ary izay ihany.
Ity safidy ity dia ankasitrahana ho antsika izay mamaky amin'ny alina na ho an'ireo izay maniry tint amin'ny efijery Android fotsiny, ary i Cyanogen, amin'ny fahendreny mandrakizay, mampiditra azy ao amin'ny ROMs
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Vokatry ny famerenana amin'ny ROM CyanogenMod
Jonas dia hoy izy:
Tsara izany fa rehefa ataoko dia miadana kokoa ny findaiko ...
Mamaly an'i jonas
Ksisha dia hoy izy:
Mila takelaka Luis.
Valiny amin'i Ksisha
Marina fa zavatra mitovy amiko no mitranga rehefa mampavitrika azy aho, mihisatra ny zava-drehetra, ara-dalàna ve izany sa misy zavatra tsy ampy?
Samsung Galaxy Mini, fanombohana